UZhanna Friske, izindaba zakamuva, impikiswano, uShepelev, ukuhlaselwa, ukuphawula
Iviki elizayo lizoba yingxenye yonyaka kusukela osukwini lokufa kukaZhanna Friske, futhi konke lokhu kuxabana phakathi kukababa womculi nomyeni wakhe uDmitry Shepelev uyaqhubeka. Ngokungafani nomphikisi wakhe, owayevame ukuvela kuzo zonke izinhlobo zezinkulumo ezibonisa "ukuchayeka" kumkhwenyana wakhe, uShepelev waqhubeka ethula, eshiya ukuhlaselwa kukaVladimir Friske kuye ngaphandle kokuphawula.
Izindaba zakamuva ukuthi uVladimir Friske enkampanini yamadoda angaziwa ahlasele umethuli we-TV, wamangala umphakathi. U-Dmitry wenze isinqumo okokuqala ukuphawula ngxabano, izwe lonke elibukele izinyanga eziyisithupha. UShepelev wabhala umlayezo wevidiyo, owanikeza esiteshini seTVNNews. U-Dmitry uthe usebenzisa "izinyathelo eziphuthumayo" ezinjalo, ngoba ngenxa yokuhlaselwa kwePlato encane - ingane yashaywa usulu, yaba ubufakazi bokuhlaselwa kukayise wakhe:
Okwenzekile kwaba ukuthuthumela okukhulu kuPlato, ngoba ngaphambi kwamehlo omntwana esitebhisini, iminwe yami yaphule iminwe yokuqapha, yaphule ikhala lami, lafunga, lakhala. Ngicabanga ukuthi ubani oqonda ukuthi ngaphandle kwemiphumela yengane lokhu akukwazi ukudlula.
Ingane, eyiminyaka emibili eyedlule iphethe iminyaka engu-2 nezinyanga ezingu-8, kwakukhona ukukhathazeka kwangempela. UShepelev kwadingeka afune usizo ku-neuropathologist yezingane kanye nesazi sengqondo.
Umethuli we-TV uyaqiniseka ukuthi uyise kaJeannene Friske, osengakwazi ukusinda ekufeni kwendodakazi yakhe, kufanele afune usizo lwabachwepheshe. Kuze kube yilapho isimo sikaVladimir Borisovich sigxilile, umkhulu, ngokusho kukaDmitry, kungaba yingozi kuPlato. UShepelev uthe kumele afake isicelo sokuvikelwa komthetho.
Indodakazi Timati no-Alena Shishkova bathola njengesipho esivela kuPapa SUV
I-Mass Media: I-Buzov Iyinqoba ye-Roman Abramovich
UCatya Lel ubonise u-Alexander Domogarov osemdala: abalandeli bakhathazekile ngempilo yomculi
ULarisa Kopenkina weza "Dom-2" nge Prokhor Shalyapin futhi wahlabelela, ividiyo
Sandwich nge ingulube ku-Vietnamese
Izakhiwo zokwelashwa nezomlingo we-amethyst
Izindlela zokwelapha izilonda zesisu
Yiziphi izinhlobo zamadoda abesifazane abathanda?
I-Rosehips yokulahlekelwa isisindo
Izibungu ezinothuli nokulawula kwazo
Izakhiwo zokwelashwa nezomlingo we-wavellite
Eholidini phesheya nezingane
I-Pareos: ukuthunjwa okuphansi kwe-chiffon
Amasks for izinwele kusuka izinwele ukulahlekelwa